Paramende Inomisa Basa Rayo nePamusana peCoronavirus
Kurume 18, 2020
Les membres nouvellement élus du Parlement du Zimbabwe se préparent à prêter serment lors d'une cérémonie d'assermentation à Harare le 5 septembre 2018.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza misangano yevanhu vanodarika zana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCoronavirus, paramende yamira kuita misangano yayo kudzamara dambudziko reCornvirus ragadziriswa.
Vachitaura patanga kugara dare reNational Assembly, mutauriri wedare iri, VaJacob Mudenda, vati paramende yapedzisira kuita misangano yayo neChitatu uye inotarisirwa kutanga kuita misangano zvekare musi wa 5 Chivabvu zvichienderana nekuti zvinhu zvinenge zvakamira sei panyaya yechirwere cheCoronavirus.
Asi VaMudenda vatiwo misangano yemakomiti pamwe neimwe yekutsvaga pfungwa dzevanhu yambomiswawo.
Asi vati pane mimwe misangano nenzendo dzakatorongwa kare uye dzine vanhu vasingadarike zana zvichaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa.
Sachigaro vekomiti inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende, VaTendai Biti veMDC, vati danho iri richakanganisa makomiti akaita seyavo ine basa riri kushamashure.
Asi VaMudenda vati sezvo komiti iyi iine vanhu vari pasi pezana, panogona kurongwa kuti ienderere meberi nebasa rayo uye vanofanira kuronga nemunyori weparamende.
Dzimwe nhengo dzeparamende dzakaita saAmai Goodluck Kwaramba veZanu PF vati havazivi kuti votangira papi kuti vadzokere kunzvimbo yavanomirira nekuda kwedanho iri.
Asi VaMudenda vati nhengo dzeparamende dzichabvumidzwa kugara mumahotera kusvika nemusi weChishanu paramende ichatsvaga mafuta emotokari kuti dzidzokere kunzvimbo dzavo.
Nhengo yebhodhi resangano rinoshanda rakazvimirira rePlaform for Youth and Community Development, VaOwen Dhliwayo, vaudza Studio7 kuti danho ratorwa neparamende rakakosha pakudzvirira kupararira kwechirwere cheCoronavirus.
Vanoongorora zvematongerwo zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Doctor Pedzisayi Ruhanya, vati zvaitwa neparamende zvakakosha asi vakati paramende inofanira kugara yakagadzirira kudzoka kubasa sezvo pane rimwe basa rinogona kuda kuitwa rakaita sekugadzira mabhajeti ekurwisa Coronavirus sezviri kuitika kuAmerica.
Vaenderera mberi vachiti chinhu chikurusa chiri kudiwa pari zvino muZimbabwe, kuti mutungamiriri wenyika pamwe nemapato ese anopikisa vabatane mukurwisa Coronavirus sezviri kuitwa kuSouth, uko mutungamiriri wenyika iyi, VaCyril Ramaphosa, vabatana nevemapato anopikisa vachitaura kunyika yavo pamusoro peCoronavirus.
Paramende yeZimbabwe ine nhengo mazana matatu nemakumi mashanu mumatare ayo eSeneti neNational Assembly umo dzinogara dzakatsikirirana sembeva sezvo muzinda weparamende wakavakirwa nhengo dzisina kuwanda zvakadai.
Kunyange hazvo Zimbabwe isati yave neCoronavirus, chirwere ichi chatove munyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa.